“Inaad Barcelona ku garaacdo El Clasico ayaa ka dareen fiican inaad qaado horyaalka.”. – Gool FM
(Madrid) 02 Abriil 2016. Laacibkii hore ee Real Madrid Xabi Alonso ayaa aaminsan inaad Barcelona ku garaacdo Camp Nou ay xitaa ka dareen fiican tahay inaad horyaalka La Ligaha kula guuleysato Real Madrid.
Xiddiga qadka dhexe ee Bayern Munich ayaa shan sano ku qaatay gegida Santiago Bernabeu wuxuuna door muhiim ah ka ciyaaray La Decima ee xilli ciyaareedkii 2013-14 wuxuuna horey ugu guuleystay La Liga labo sano oo hore.
Horyaalkaa ay qaaday Real Madrid oo ay qeyb ka ahayd guul daradii ay Barca gurigoodu ku bideen ayuu Alonso sheegay inaad ka guuleysato Catalonia ayaa ka macaan badan tahay inaad xitaa ku guuleysato horyaalka nafsadiisa.
“Marar yar ayaan ku soo guuleysannay Camp Nou, sida 2012-kii,” Alosno ayaa sidaaa u sheegay Goal.
“Wuxuu ahaa sanadkii aan ku guuuleysannay La Liga 100 dhibcood, laakiin inaad ku guuleysato Clasico 2-1 ayaa ka dareen wacnayd.”.
“Taasi waxa ay ahayd mid wanaagsan inaan xusuusnaano”.
Barcelona oo toban dhibcood ka sarreysa Real Madrid ayaa caawa Camp Nou ku marti galin doonta Real Madrid kulankii ugu horreeyay uu Zidane layliyo El Clasico.
Kumaa ku adkaan kara kooxaha Barcelona iyo Real Madrid kulanka caawa ee El Clasico?